Home || Online Tahalka पुरूषले नै खर्च गर्छन पहिलो डेटमा किन ? २७ वर्षीया लेखिकाको अनुभब
जब मैले डेटिङ गर्न सुरु गरेँ तब मेरी आमाले मलाई खानपिन कहिले पनि निःशुल्क हुँदैन भन्ने गर्नु गर्थिन् । उनले भन्थिन् धेरै पुरुषले यो सोच्नेछन कि तपाईंले यसको बदलामा केही दिनैपर्छ ।
मलाई थाहा थियो, मेरी आमाले मेरो मनमा कुनै घृणा पैदा गर्न चाहन्नँथिन् । तर जतिबेला म कोही नयाँ व्यक्तिलाई भेट्थे, उनको सल्लाह सुनेर मलाई रिस उठ्थ्यो । डेटिङका बेला पाँच डलर पर्ने बियरको बिल तिर्दा पुरुषप्रति पैदा हुने कर्तव्यबोधबाट स्वतन्त्र हुन मलाई निकै समय लाग्यो ।
तर पहिलो डेटमा बिल कसले तिर्ने भन्ने विषयमा सधैं बहस हुन्छ । क्यानडाको टोरोन्टोमा बस्ने २७ वर्षीया लेखिका एन रुचेटोले आमाको सल्लाह पाएको थुप्रै वर्षपछि पहिलो डेटमा पुरुषले नै खानाको बिल तिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिन।
-कसले तिर्नुपर्छ बिल ?
महिलाले पुरुषले झैं बराबरीको हक पाउनुपर्छ । हामीले डेटको क्रममा आफ्नो बिललाई आधा–आधा बाँड्नुपर्छ’ । म यस्तो सोच भएकी महिला हुँ । म यस्तो रेष्टरेन्टको खोजीमा हुन्छु जहाँ बिलको आधा रकम चुकाउन सकियोस् । तर पाँच वर्षअघि मेरा साथी र शिक्षकले मलाई यस्तो विचारबाट अवगत गराए जसले मेरो सोचलाई चुनौती दियो ।
मैले बेल हुक्स उपनामबाट लेख्ने ग्लोरिया जीन वाटकिंसजस्ता महिलावादी लेखिकालाई पढ्न सुरु गरेँ ।
उनीहरुलाई पढ्दै गर्दा मैले सोचें कि वर्तमान ढाँचाका कारण समाजमा कसलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा भइरहेको छ । वाटकिंस र अन्य लेखकलाई पढ्दै गर्दा मैले व्यक्तिगत लेनदेनदेखि हरेक स्तरमा शक्तिको समिकरणले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे पनि मैले सोच्न सुरु गरें ।
-अत्यधिक खर्चिलो जीवनशैली
उत्कृष्ट सम्बन्धका लागि मानिसहरु समता हाँसिल गर्न कोसिस गर्छन् । एकपटक म एक पुरुषसँग पहिलो डेटम थिएँ । उनले धेरैजसो समय आफ्नो स्पोर्टस कार र यात्राको बयान गरेर बिताए । त्यसपछि जब बिल तिर्नुपर्ने समय आयो तब उनले बिलको रकम बाँड्नुपर्ने बताए । यो सुनेर म सोचमा परेँ ।
रोचक कुरा के छ भने यस्तो समृद्ध परिवारका ती पुरुषले मेरा साथीहरुबीच आफू महिलावादी भएका कारण खर्च बाँड्नुपर्ने पक्षमा भएको घोषणा गरे ।
पुरुषले चाहे यो कुरा मानून् या नमानून् तर पुरुषको तुलनामा महिलाको तलब थोरै हुन्छ । यतिमात्र होइन, पुरुषले यो पनि मानून् या नमानून्, यसले पुरुषलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याइरहेको छ ।
तर पुरुष मेहनत गर्दैनन् वा उनीहरुले नै सधैं बिल तिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । यदि मभन्दा कम तलब पाउने पुरुषसँग यदि म डेटमा जान्छु भने म बिलको आधा रकम तिर्न तयार छु ।
साथै, यदि पहिलो डेटको बिल तिरेपछि यदि कुनै पुरुषले ममाथि अपेक्षा राखिरहेको छ भने म उनलाई बिल देखाउन सुझाव दिन्छु । त्यसपछि उनीसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध राख्दिनँ । यस्ता पुरातनवादी सोचले बताउँछ कि यस्ता पुरुष महिलाको सम्मान र उनीहरुको सहमतीलाई महत्व दिँदैनन्न ।
-शक्तिको असन्तुलनलाई चुनौती
अहिले हामी बाहिर घुम्न जाँदा वा एक अर्काको घरमा जाँदा आफ्नो क्षमताको आधारमा खर्च बाँड्छौं । भविष्यमा यो परिवर्तन हुनसक्ला तर हामीबीच एक सन्तुलन कायम भएको छ । हाम्रो उद्देश्य यो हो कि हामी दुबै सम्मानित महसुस गरौं र कसैलाई पनि आफ्नो फाइदा उठाइँदै छ भन्ने नलागोस।
हामी राम्रा मानिसहरुसँग समय बिताउन चाहन्छौं भने शक्तिको असन्तुलनलाई चुनौती दिनु प्रत्येक सम्बन्धको लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।पहिलो डेटमा कसले पैसा खर्च गर्नेछ, त्यसले सम्बन्धका नियम निर्धारण गर्दैन । डेटपछि जब मानिसबीच एक तालमेल बन्छ तब मानिसहरु त्यो समिकरणको खोजी गर्न सक्छन् जुन दुबैको दष्टिकोणमा ठिक हुन्छ । बीबीसी